Akụkọ - uwe elu Polo
Na ngwụsị narị afọ nke 19, ihe omume dị n'èzí ghọrọ ihe dị mkpa maka klaasị ndị ọchịchị Britain. Jodhpur ogologo ọkpa na uwe elu polo ghọrọ akụkụ nke wodrobu maka egwuregwu ndị metụtara ịnyịnya. Ndị Britain weghachitere India abụọ uwe, yana egwuregwu polo. Uwe elu polo mbụ dị ka bọtịnụ egwuregwu ọgbara ọhụrụ. A na-etinye ha bọtịnụ, ogologo ma ọ bụ uwe aka dị mkpụmkpụ, dị iche site na iji ihe na-emebi emebi karịa uwe elu na igosi ihe mkpuchi ala iji gbochie olu ahụ ịfụgharị mgbe ha na-agba ịnyịnya. Maka nke a, Brooks Brothers na -erere akara ngosi akwa ya na akwa oxford dị ka "Polo mbụ."
Uwe elu polo bụ ụdị uwe elu nwere olu olu, olu akwa akwa nwere bọtịnụ abụọ ma ọ bụ atọ, yana obere akpa. Uwe elu Polo na -abụkarị obere aka; Ndị egwuregwu polo jiri ha na mbụ na India na 1859 yana na Great Britain n'oge 1920s.
A na -ejikarị akwa polo na -eyi uwe elu (kama ịbụ akwa a kpara akpa), na -abụkarị piqué knit, ma ọ bụ na -adịkarịkarị na -ejikọ ọnụ (nke a na -ejikarị eme ihe, n'agbanyeghị na ọ bụghị naanị, na pima owu polos), ma ọ bụ jiri eriri ndị ọzọ dị ka silk, ajị anụ merino, eriri sịntetik, ma ọ bụ ngwakọta nke eriri eke na nke sịntetik. A na-akpọ ụdị ogologo uwe elu uwe elu polo.
Anyị na -emepụta uwe elu polo dị ka nke ahaziri iche mgbe ụfọdụ, ka ọ dị ugbu a, anyị na -emepụtakwa ụfọdụ ụdị ewu ewu nwere agba nkịtị maka ụmụ nwoke na ụmụaka, dị ka agba ọcha, agba ojii, agba isi awọ melange, agba mmiri, agba uhie. Uwe elu polo ndị a, anyị na -emepụta tupu oge eruo, ọ bụrụ na ndị ahịa anyị chọrọ ka anyị jiri ụfọdụ mbipụta na ịcha mma, anyị ga -enye nhọrọ dịka ihe ha chọrọ, n'ụzọ dị otu a, anyị nwere ike nye ndị ahịa anyị uwe elu polo ngwa ngwa, ọkachasị n'oge ọkọchị. , nke a dị ezigbo mkpa.